Shina 330kV dobo tadivavarana Y-karazana tilikambo fanamboarana sy orinasa | XY Tower
Tamin'ny taona 2008, natsangana ny XY Tower izay nifantoka tamin'ny famokarana tilikambo vy. XY Tower dia nahazo tombony tamin'ny loharanom-pahalalana ho an'ny mpanjifa sy ny fantsom-pamokarana matanjaka ao amin'ny Vondrona, ny fampandrosoana ny XY Tower dia haingana tato ho ato. Amin'izao fotoana izao, XY Tower dia manome tilikambo vy maherin'ny 1000 isan-taona. Ny mpanjifa dia mandrakotra faritany 20 any Chine sy tsena ivelany. XY Tower no mpamatsy mahay ny vondrona Global 500 maro dia misy ny fantsom-panjakana g fehikibo atsimo 、 Vondrona injenieran'ny angovo sinoa 、 Telecom China 、 Huawei sns. Raha toa kosa ny vokatra vokarinay dia ampiharina tsara amin'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny kaontinanta ASEAN ASEAN Afrika sy Amerika.
Previous: 330kV tilikambo fiaran-dalamby avo roa heny
Manaraka: 330kV tilikambo tokana Y-type tower tower
Tower Power Line